Casharrada iyo tabaha lagu barto sida loo dayactiro loona hagaajiyo dhammaan noocyada - Ikkaro
Waqti kahor waxaan aqriyay qof yiri:
Aabbahay wuxuu i baray inaanay ahayn inaynu ka xishoonno waxyaalaha jajaban laakiin aynaan garanayn sida loo dayactiro.
Waana run. Oo waxaan u maleynayaa in balooggu u qalmo qaybta dayactirka halkaas oo aan isku dayo inaan ka caawiyo dadka inay hagaajiyaan dhammaan noocyada waxyaalaha laga bilaabo microwave ilaa playmobil.
Ma aha wax kasta oo jabaa inay yihiin koronto. Toy A fudud, xoogaa yar oo caag ah waa la hagaajin karaa oo malaha ma aha sida fudud sida ay u muuqato haddii aynaan garanayn sida loo shaqeeyo qalabka ama haddii aan garanayn sida loo furo gabal.
Waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso haa ama haa ururinta sameeyayaasha iyo dayactirka ayaa muujiya maxaan qabanay
Maxaan arki doonnaa
Dhammaan noocyada dayactirka ee aad sameyn kartid ama sharxi kartid. Sidaan u idhi ma aha oo kaliya qalabka guryaha. laakiin walxo kale oo mararka qaar u muuqda kuwo aad u fudud.
Waxaan isku dayi doonaa inaan aragno astaamaha ama sida loo aqoonsado dhibaatooyinka iyo sida aan u xallin karno.
Dayactir iyo dib u isticmaal Waxaan dooneynaa in aan wax ka yar cunno oo aan dheereyno nolosha alaabteenna.
Sida loo sameeyo beddelka xarriijinta nayloon ee loo yaqaan 'Bosch burcosterters'
Tani lafteeda maahan dayactir, laakiin waxoogaa yar oo jabsi ah ayaa lacag naga badbaadineysa. Qalabka dayactirka ee Bosch aad ayey qaali u yihiin maqaalkanna waan ku tusi doonaa sida looga isticmaalo khadka naylka ee noocyada kale ee ku yaal magaallada Bosch burushka jaraya.
Waxaan hayaa burcade koronto ku shaqeeya Bosch AFS 23-37 1000 W awood. Way fiicantahay. Aad ayaan ugu faraxsanahay isticmaalka aan degdegga ahayn sida kan aan u baahanahay. Waa mashiin cadey koronto, ma ahan mid batari ku shaqeeya, waa inuu ku xirnaadaa koronto si uu u shaqeeyo.
Si kastaba ha ahaatee, qalabka nyon ee rasmiga ah ee summaddu waa qaali, halkii aad u qaali ah oo loo soo saaray si aad u dhammeysato isticmaalka qaybaha dayactirka. Xaaladdan oo kale, dunta nayloonku waxay la timaaddaa nooc boolal ah oo ku yaal bartamaha oo ka horjoogsanaya inay baxsato.
Waxaan kusii wadaa PC iyo qalabka dayactirka in kasta oo tan lafteeda aan loo qaadan karin dayactir. Laakiin waa wax markasta oo ay wax badan i weydiiyaan. Qaar dhig nidaamka hawlgalka ee ka dhigaya inay ku shaqeeyaan kombiyuutarada iyagoo wata qalab duug ah ama ka sii weyn.
Xitaa haddii aan wax yar idiinka sheego go'aannada aan ku qaatay kiiskan gaarka ah, waa la sii dheereyn karaa si ka sii badan. Waxaan isku dayi doonaa inaan cusbooneysiiyo oo aan ka tago wixii aan sameeyay markasta oo dacwada la soo bandhigo.
Raac taxanaha maqaalada ee ku saabsan dayactirka kombiyuutarka. Waxyaabaha caadiga ah ee qofkasta hagaajin karo gurigeenna sida marka kombiyuutarka daaran laakiin aadan waxba ka arkin shaashadda.
Waxaan ka faaiidaystaa wareega telefoonnada gacanta Waxaan sameynayaa si aan u sharraxo oo aan u diiwaangeliyo ficilo badan oo asxaabta iyo qoysku badanaa i weydiistaan. Xaaladdan oo kale waan sharxayaa sida loo rakibo barnaamijyada APK-ka Android.
Si toos ah ayaan ugu socdaa barta, haddii aad rabto inaad ogaato waxa uu yahay 'APK' iyo goorta aad u baahan karto inaad mid rakibato, tag dhamaadka maqaalka.
Xaaladdayda Waxaan rabaa inaan dib u rakibo Play Store oo si xun u shaqeeya mobilada aan u isticmaali doono SIM la'aan sodoggaygu inuu ku ciyaaro. Ma furi karo, xitaa dib udajin ma sameyn karo warshadda waana wax aad iiga dhaqso badan inaan si toos ah u rakibo arjiga marka loo fiiriyo waxa ku dhacaya taleefanka casriga ah ama aan tooshka u ifiyo.
Tani waa waxa igu dhacay aniga oo kombuyutarkayga sagaal jirka ah. Kombuyuutarku wuu bilaabmaa laakiin shaashadda waxba kama muuqdaan. Waxaan sharxayaa sida loo ogaado khaladaadka si loo ogaado waxa fashilmay, maadaama ay umuuqato qalad guud.
Guul darradu badanaa waxay ka timaadaa mid ka mid ah 3 meelood:
Sida loo waafajiyo hawo-mareenka hawo-mareenka guud si loogu isticmaalo kan ka yar
Waxaan la imid dayactir. Wax aan qorshaynayn duugoobnimo, laakiin ku dhowaad. Waan haystaa haanta biyaha lagu dhaqo ee haanta haanta biyaha ayaa waxyeelo gaadhay. Kuwani waa dayactirro aad u fudud oo aan u baahnayn sharraxaad badan, waxaad kala bixisaa kii hore, waxaad iibsataa midka cusub oo aad gelisaa.
Laakiin taasi waa taas ma jiraan wax lagu daydo ceelkayga. Haatan waa cabir caalami ah waxayna leeyihiin dhexroor ka weyn inta aan u baahanahay. Sababta oo ah waxa aan ku haysanno guriga waa qaab duug ah oo Cunto ah.
Qodobkan dayactirka waxaan ku arki doonaa sida fur moobil shaashadiisu jabtay si aad uhesho darawalka adag oo aad awood ugu yeelatid inaad wareejiso oo aad soo ceshato feylasha, sawirada iyo fiidiyowyada. Muddo ka hor xaaskeygu waxay taleefanka ku tuurtay BQ Aquaris E5 shaashaddeeduna way jabtay, umaba muuqan wax la buunbuuniyey, laakiin salka hoose ma shaqeynayo. Waad arki kartaa, laakiin ma isticmaali kartid. Oo halkan ayaa dhibaatadii ka timid. Waan furi kari weynay mobilka, maxaa yeelay aagga qaabku kama jawaabo taabashada. Dabcan ma heli karno darawalka adag mana qaadi karno sawirada iyo fiidiyowyada ay keydisay.
Waxaan eegay fursado badan oo aan ku qaadi karo sawirada. Beddel shaashadda, softiweer fara badan oo jebiya qaababka iyo habka la doortay, xarigga OTG, Beddelidda shaashadda kiiskan ayaa ahayd ikhtiyaarka ugu qaalisan, maxaa yeelay beddelkiisa ma ahayn mid raqiis ah maaddaama moobiilku uu sannado qaatay waxaan go’aansanay mid cusub ugu beddel. Waxaan isku dayaa inaan ururiyo macluumaadka ku jira qodobkaan oo aan ka tago fiidiyoow anigoo isticmaalaya fiilada OTG.
Soddoggay wuxuu maalin kale i siiyay buug aan ku hagaajiyo. Waxay ahayd tii ay iskuulka geeyeen. Spain waa sidaas oo kale. Buuggu wuxuu la socday daboolka xaalad xun iyo go'yaal gudaha ah oo dabacsan. Waan ka xumahay laakiin wax kama heli karo sawirrada ka hor. Waan sameeyay iyaga, laakiin ma aqaan meel ay ku sugan yihiin :-(
Waa buug keli-taliska ah. Carruurtu waxay u kaxeeyeen dugsiga, waxayna ka tirsan tahay Guriga Madbacadda Isbaanishka. Gudaha waxaan ka helnaa caqiido nadiif ah. siyaasad walax. Laakiin waxaan filayaa inuu buuggu leeyahay qiime taariikhi ah oo ay u muuqatay dambi in la tuuro.
Sameeyayaasha, dayactirka iyo muuqaalka DIY
Waxaan ku dhex quusanayay dadka waaweyn Ku muujinta DIY, Is-hagaajinta, Sameeyayaasha, oo aan ka helay internetka. Fikrado badan ayaa laga soo saaray xuquuqda aan u leenahay macaamiil ahaan iyo wax yar oo ku saabsan waajibaadkayaga iyo masuuliyadeena. Mawduuc si dhow ula xidhiidha gabal dhacii qorshaysnaa ee caanka ahaa
Haddii aadan dayactiri karin, adigaa iska leh
Waxay xoogaa da 'yihiin, ku dhowaad nooc laakiin waa sida xiisaha leh. Waxaan ku haystay qabyo ah muddo dheer waxaanan u maleynayaa in hindisaha uu u qalmo boos Ikkaro.
Soo bandhigida barnaamijyadan Waa bar bilow si aan u milicsado sidii aan horeyba uga sheegay xuquuqda, waajibaadka iyo waajibaadka na saaran macaamiisha ahaan. Khasab kuguma aha inaad wax uun u qaadatid, xitaa haddii wax ka muuqdaan degel sumcad leh, maahan inaad ogolaato. Waa inaad horumarisaa fekerka muhiimka ah. Ma ku raacsanahay waxa ku qoran? Runtii ma xaqbaa? Sidee ayey aniga iiga faa'iideysaa macaamil ahaan, macaamiil kale, meeraha? Yuu dhibicdan dhaawacayaa? Waxaa jira daraasiin su'aalo ah oo ay tahay inaan isweydiino oo aan ku xirno anshaxa, anshax cunid.
Manifesto Is Dayactirka ah ee iFixit.com
Sida loo hagaajiyo cajalad cajalad ah
Waan helay cajaladaydii cajaladaydii hore, inbadan oo leh muusig iyo kuwa kale oo badan oo sheekooyinka carruurta iyo heesaha leh. Aniga oo ka faa'iideysanaya xaqiiqda ah in Clio ay wali heysato raadiyaha cajaladda, waxaan doonayay inaan xoogaa cajalado ah u dhigo gabadhayda si aan u arko inay iyadu jeceshahay iyo in kale. Aad baan uga xumahay inaan iska tuuro.
Laakiin qaar badan baa jabay, cajaladdii waa dillaacday. Marka waxaan sharaxayaa sida loo hagaajiyay, sida canshuurta, maxaa yeelay uma maleynayo inay jiraan dad badan oo xiiseynaya hagaajinta iyaga, laakiin haddii qof waligiis gacantaada ku dhaco oo aad rabto inaad dhageysato, laga yaabee gelitaanka inuu kuu anfacayo.
Sida loo gooyo kaarka SIM-ka mini mini ilaa micro sim iyo nano sim
Waan helaa Nexus 4 oo ka socda Google. Waxaan isku dayayaa oo aan ogaanayaa inay isticmaasho SIM micro :-(
Xalka macquulka ah waa in la aado a Kaadhka SIM nuqul, laakiin waxay ka qaadaan € 5 (haa, horay ayey bilaash u ahayd) Markaa waa inaad raadsataa xal guriga lagu sameeyo oo tanna waa la maraa jar kaarka guriga si aad ugu badasho SIM-ga yar Micro Micro.
Haa, waan ogahay ka dib markaad spending 300 ku qarashgareyso mobilka, inaad ku iibsato king 5 uma muuqato wax badan, laakiin tani waxay noqotay arrin shaqsiyadeed.
Cusboonaysii: Maalmahan kaararka horay loo sii gooyay ayaa imanaya, sidaa darteed way fududahay in laga beddelo hal cabbir oo loo beddelo mid kale. Laakiin haddii aad leedahay SIM duug ah khiyaanadani wali way kuu shaqeyn doontaa. Haddii aad keydiso € 5, kafee u caafimaadkeyga
Waa hagaag, ka hor intaanan u gooynin sida waalan, wax yar oo ku saabsan Kaarka SIM